बाँकेको जानकीमा पनि बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गर्न घरदैलो – Merokhushi
बाँकेको जानकीमा पनि बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गर्न घरदैलो
मेरो खुसी । २८ फाल्गुन, २०७७ शुक्रबार १९:२३ मा प्रकाशित
सुरज गुरुङ । गिजरा (बाँके)
बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा पनि बालविवाह मुक्त वडा घोषणाका लागि घरदैलो गरिएको छ ।
जानकी–४ की वडा सदस्य विपति सुनारको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दका प्रहरी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सिर्जनशील किशोरी क्लबका पदाधिकारी र सदस्यले गाउँपालिकाको वडा नं. ४ गिजरामा शुक्रबार घरदैलो कार्यक्रम गरेका हुन् । सो अवसरमा किशोरीहरुले घर–घरमा बालविवाहविरुद्धका स्टिकर टाँसेका थिए । घरदैलोको अवसरमा किशोरीहरुले खाजा खर्च कटाएर बचत गरेको पैसाबाट विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई कापी र कलम पनि सहयोग गरेका थिए ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको सहयोगमा स्याक नेपाल बाँकेले जानकी गाउँपालिकामा बालविवाह रोकथाम परियोजना सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले वडा नं. १, ४ र ६ लाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणाको तयारी गरेको छ । यसअघि खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ लाई जिल्लामै पहिलो बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।